मजदुरको किन सरकार हुँदैन ?
संसारका मजदुरहरु एक हौ !!
यही नाराको साथ हरेक साल मे १ तारिक संसारभर मजदुर दिवस मनाइन्छ। तर पनि आजसम्म मजदुरको कुनै सरकार भेटिएको छैन। हुनेखानेलाइ त जहाँ नि सरकार भेटिन्छ तर गरिब मजदुरलाई गास, बास र कपास दिलाउने कुनै सरकार भेटिएको छैन। भन्न त भन्छन, ठुला ठुला भासण गर्छन हामी मजदुरको लागि काम गर्दै छौ, हामी मजदुरका नेता हो र हाम्रो सरकार नै मजदुरको सरकार हो। तर सत्ताको भत्ता खाए पछि नेताले आफ्नो बिगत बिर्सन्छ्न, हैसियत बिर्सन्छ्न। यदि मजदुरले सरकारको बिरोध गरे पुलिस लगाएर लाठि चार्ज गर्छन अनि घर न घाटको बनाएर सडकमा छाड्छन। चुनाब जित्न, ठुला ठुला आन्दोलन गर्न मजदुर चाहिन्छ, सत्ताको भर्र्याङ् चढ्न मजदुर चाहिन्छ, मन्त्रि बन्न त्यीनका भोट चाहिन्छ तर मजदुरलाइ सरकार चाहिएको बेला सरकार कतै देख्न पाइदैन, त्यसैले त भन्छन् सबैले मजदुरको कुनै सरकार हुदैन।
देशमा बेवास्था फेरियो, सरकार फेरियो तर मजदुरका दुख उस्तै छन्, पीडा उस्तै छन्। कुनै मजदुरले मन्त्रीले जस्तै सेवा सुबिधा माग्दैन, उनीहरुलाई त केवल बिहान बेलुका खान अनि दुख पर्दा औषधि उपचार मिलाइदिनु पर्यो।
आफुलाई सर्भहारा बर्गको नेता ठान्ने प्रचण्डको पार्टीले अहिले नेपालमा सरकार चलाएको छ। प्रचण्ड आफु अगाडी पछाडी पुलिसको गाडीमा सुरक्षा लिएर हिड्छन तर उनका जनता लक्डाउनमा काठमाडौँदेखि पैदल हिडेर कर्णालीसम्म पुग्छन।
यो दुखको बेला मजदुरको दुख बुझेर आफ्नो आफ्नो घरसम्म पुर्याइदेउ सरकार होइन भने मजदुरको आशु लाग्ला !!
अन्तिममा जनता गाएक, मजदुरका गाएक जीवन शर्माले गितमा भने झै मजदुरको मनमा एउटा ज्वाला-भाटा सधै रहेनछ र त्यो जुनसुकै बेला बिस्फोट हुन सक्नेछ :-